ifriizi Fikiere lanarị nri - Best amụba Ifriizi Mịrị Food
Nkume a Comment	/ Nchekwa nri ngwa ngwa / site Admin
Enwere ike inwe oge mgbe ị na-agaghị apụ apụ oge ụfọdụ. N'okpuru ọnọdụ ndị a, ị ga-achọ ka gị na ya rie nri ụbọchị niile ị ga-apụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, ị gaghị enwe ike iburu gị esiri esi nri na nke a bụ ebe mkpa ịchekwa nri nke ọma ga-abata. nri ndị nwere ogologo ndụ ma zụrụ maka nchekwa dị ka nri mberede.
Otu nhọrọ maka ụdị nri ndị a bụ ifriizi kpọrọ nkụ. Typesdị nri ndị a na-agabiga usoro iji nwayọ nwayọ wepụ mmiri ha nwere. Mwepụ nke a dị nro nke mmiri ọdịnaya na-eme ka o doo anya na imirikiti ihe ndị na-edozi ahụ na vitamin na-adịgide. Ọtụtụ mgbe, naanị tinye obere mmiri ka ọ nọrọ ọdụ maka 10 Nkeji ole na ole ị tụgharịchara ya nke ọma.
Typedị nri a na-adịru ogologo oge ma ụfọdụ nwere ike ịchekwa ya ruo 25 afọ ma ọ bụ karịa. Nke a pụtara n’ezie na ị gaghị edochi ha oge niile tupu ụbọchị ha ga-agwụ ma chekwaa gị ego na ogologo oge.
Na-eme nke ọma ndụ, ọmụmaatụ, Uzo nke nri akpri akpukpo aru di iche-iche, site na anụ ehi na mkpụrụ osisi na desserts dị ụtọ dị ka cheesecakes.
Ifriizi-Fikiere – tinyere akwukwo nri ndu, ofe na stew mixes, ngwaahịa mmiri ara ehi nke ụdị dị iche iche – ndị ọzọ bụ ihe a ma ama maka idebe nri akọrọ.
Ọzọkwa, eziokwu a hụrụ dị ka isi iyi nke ọleeụ fun n'ihi na ndị na-eleda amamihe nke ewu ihe mberede nri; ọ na-enye aka iche n'echiche okwu mkparị ndị ahụ na-agbapụ n'ọnụ na-enweghị oghere nke na-ejukarị nri nri ngwa ngwa nke otu ihe ahụ "ndị na-akwadebe" na-echekwa.
Ya mere, o doro anya, na ‘ihere ike’ ịchekwa nri akọrọ dị n’ihe gbasara oge ịchọrọ: ndị na-arụ ọrụ lanarị na-eyigharị afọ ojuju, itinye ego na nri ha ga-eri n'ọdịnihu, ebe ndị aghụghọ ha na-emefusị ego – otutu agbaziri – na nri "ọnụ ala", ha na-eri nri ugbu a ma na-akwụ ụgwọ ma emechaa. O nwere ike ịbụ “dị jụụ”, ma ọ bụ maa bụghị smart.
E wezụga ọchịchọ ọnwụ gbagọrọ agbagọ ma ọ bụ agụụ eccricric maka ihe isi ike, kedu ihe kpatara mmadụ ga-eji wepụta oge iji nweta nri zuru oke?
Ugbu a kedu ka ị ga esi eme atụmatụ nchekwa nri gị
Atụmatụ nchekwa nri mberede
Ndị a bụ atụmatụ ole na ole iji nyere gị na ezinụlọ gị aka ịhazi usoro nchekwa nri mgbe ị na-anọghị.
Malite na a 72 Oge Nri Mberede Oge Nri na 7 Day Food Unit nke Mountain House Ifriizi Fikiere Food akpa n'ihi na onye ọ bụla na ezinụlọ gị n'ụlọ. Na-etinyekwu mmiri ya mgbe niile n’ebe dị jụụ, ọ bụrụ na ọ kwe omume.
Nwee usoro nchekwa nchekwa ngwa ngwa maka gị na ezinụlọ gị 3 ka 6 ọnwa ole na ole n'ụlọ gị. Nwere ike ịnweta ọtụtụ mmalite, inine na desserts with Thrive life Oyi kpọnwụrụ nri, nke nwere ndụ ndụ nke 7 ka 30 afọ. Ihe oriri na-eme nke ọma na-adị mfe ịkwadebe na mmiri ọkụ ma ọ bụ mmiri oyi ma ọ bụ nri kachasị ajụ oyi na ahịa.
Nwee usoro nchekwa ihe mberede ogologo oge maka gị na ezinụlọ gị 1 ka 2 afọ, ma ogologo ma ọ bụrụ na i nwere ike imeli ya. Peoplefọdụ ndị na-echekwa 3 ka 5 afọ nke ifriizi-Fikiere nri. Eme nke oma ifriizi Achicha nri bu ihe magburu onwe ya, dị ka ha nwere adị ndụ nke 25-30 afọ. Nwere ike nweta ha na tupu e mere nri nchekwa nchịkọta, ịchekwa oge na ego! Akwadoro ka ị debe ihe oriri ndị a n'ebe dị jụụ n'ụlọ gị, dị ka ebe ndọba ụgbọala, okpuru ulo, ma ọ bụ okpuru ulo, ọ bụrụ na ọ dị.
Dịkarịa ala abụọ 72 ngwa ngwa nri nri oge a na azu paaki n'ime ụgbọ ala gị ma ọ bụ gwongworo nwere ọtụtụ mmiri ma ọ bụrụ na mberede na ụgbọ gị.
Ndepụta a nwere ike ịbụ 5 oge niile na ihe ndị ọzọ iji kwadebe gị maka njikere mberede, ma ihe kachasị mkpa ịmalite bụ nri kpọnwụrụ akpọnwụ (Ihe oriri na-eme nke ọma bụ nhọrọ dị ukwuu) na mmiri dị ọcha.
Why-aga na-eme nke ọma ndụ?
Ọ dị mkpa mgbe niile ịtụle ịchekwa nri ndị a kpụkọrọ akpụkọ nwere ogologo ndụ. N'echiche anyị, Thrive life Ifriizi Akọrọ nri bụ nnọọ ihe kasị mma na ebe a bụ ihe mere:
Usoro mkpokọta oyi nke ejiri mee ka nri kpọnwụrụ akpọnwụ na ndụ na-eme nke ọma na-echekwa njirimara kacha mma nke nri. Nke kachasị mkpa, ọ na-ejigide enzymes ndị sitere na nri, nke mere na ị na-eri nri ahụike. Nri na-ekwe nkwa nụrụ ụtọ nke ukwuu mgbe ọ gasịrị 30 afọ.
A na-eme ka ihe oriri na-ekpo ọkụ nke ndụ na-eme otu ihe ahụ dị ka nri ndị a na-eme n'ụlọ, kama were 10 nkeji iji kwadebe. A na-eji ihe oriri akpọọ nkụ kpọnwụrụ site na iji usoro atọ.
Nke mbụ, ha na-azuta akụrụngwa dị mma. Nke abuo, nri gị ifriizi ihicha akụrụngwa nwere iche uru, dika o n’eme nri gi uto, lee anya ma dikwa ocha, tụọ obere, ma jigide ọtụtụ nri. Na nke atọ, usoro nri ya na-eme ka nri kpọnwụrụ akpọnwụ mee ụlọ, otu n'ime ụlọ ọrụ na-esi nri ha Ezi ntụziaka ọhụrụ tupu ifriizi-ihicha. Ndị ọzọ na-ezukọta ihe ndị akpọnwụwo na ngwugwu.
Eme nke ọma ndụ ifriizi-Fikiere oriri a ga-echekwara na ịdị ọcha na akọrọ ọnọdụ, na-enweghị ekpughere ogologo oge na oke okpomọkụ ma na-ezere ebe ọ bụla nwere ike imebi nkwakọ ngwaahịa, dị ka punctures, dents ma ọ bụ ajari.
Eme nke oma ifriizi Dried Foods bụ ụlọ gị pụọ n'ụlọ.
Nyochaa ụlọ ahịa nri ndị ọzọ
Nke a bụ otu n'ime ụlọ ọrụ nchekwa nchekwa nri kachasị mma n'ihi na ọ na-etinye nnukwu ego na ekpomeekpo ma na-enye ihe niile achọrọ iji kwadebe nri nwere ogo kacha mma.. Companylọ ọrụ a nwekwara nhọrọ dị mma maka ndị na-eri nri na-enweghị nri na nri anaghị eri anụ, ma na-ekwusi ọnụ ala maka ihe ndị a la carte, yabụ ị nwere ohere ịhụ ma ịzụrụ ụfọdụ nri bụ ezigbo ego. maka nchekwa. nri ogologo oge.
Ebe nchekwa nri augason Farms
Augason Farms na-enye nnukwu ngwakọta nke ihe ndị dị mkpa, dị ka ofe, mkpụrụ osisi kpọnwụrụ akpọnwụ, agwa, ihe ọṅụṅụ mixes, na akwụkwọ nri. Mmiri ihe ọṅụṅụ na ihe nzacha mmiri na-efu na nhọrọ gị. Inwe ezigbo nri nlanarị dị mma, ma na-enweghị mmiri dị ọcha ma ọ bụ ọkụ, ọtụtụ nwere ike abaghị uru na mberede. Ihe dị mkpa mberede bụ ọrụ na-enye ihe ngwọta mmiri na nhọrọ nri gị.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịma ụlọikwuu ma ọ bụ chọọ nri ahụ obere oge, ọ ka mma ịhọrọ nri akwadoro na ụlọ ahịa a – ọ gwụla ma ị chere na ị nwere ike ịnweta mkpọ chiiz powdered 52-ounce na ihe ọ bụla. nke oge. Ị nwere ike ịzụta nnukwu akpa nchekwa nri buru ibu nwere nri ga-ezuru afọ ole na ole, ma enwere nhọrọ maka ọnọdụ dị mkpirikpi.
Ọrụ a na-enye ezigbo ngwakọta nke ihe dị mkpa dị ka ofe, mkpụrụ osisi kpọnwụrụ akpọnwụ, agwa, ihe ọṅụṅụ mixes na akwụkwọ nri. Mmiri ihe ọṅụṅụ na ihe nzacha mmiri na-efu na nhọrọ gị. Inwe ezigbo nri nlanarị dị mma, ma na-enweghị mmiri dị ọcha ma ọ bụ ọkụ, ọtụtụ nwere ike abaghị uru na mberede.
Nchekwa nri amamihe
Ngwa ngwa mberede ma ọ bụ nlanarị ga-enwerịrị nri nwere. Ọ bụghị naanị nri ọ bụla ọzọ, mana n'ozuzu nri nlanarị akpọnwụwo oyi na-adaba adaba maka ọnọdụ ị na-ahụ onwe gị. Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị a ma ama bụ ọkachamara n'ichepụta na ire nri emebere maka ebumnuche mberede bụ nri amamihe., Inc.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ekwu na nri amamihe na-enye ndụ kacha mma, ihe mberede, na nri maa ụlọikwuu na ahịa, na ezi ihe kpatara ya. N'adịghị ka nri ndị ọzọ nke otu ụdị, Nri mara mma nke akpọnwụwo akpọnwụ dị ọnụ ala karịa. Na mgbakwunye, a na-akwakọba ya n'ime akpa e ji eje ozi, ya mere ọ dị nnọọ obere na ìhè, nwere nnukwu ekpomeekpo, wee bịa n'ụdị dị iche iche.
Ihe oriri ndị dị ndụ ekwesịghị imebi ngwa ngwa ka e wee chekwaa ha ogologo oge. Nri amamihe nwere a 25 afọ shelf ndụ!
Ngwa nri ndị amamihe na-abịakwa na nkwakọ ngwaahịa ma ọ bụ akpa enwere ike megharịa, nke a na-echekwa na nnukwu, bọket plastik siri ike. Ịwụ bọket ndị a na-eju anya dị ọkụ ibu, ọbụna maka nwata, nke mere na n'ihe mberede gị na nwa gị nwere ike iburu nri ahụ otu ọnwa ma ọ bụ abụọ.
Ịwụ ahụ ga-abakwa uru maka ihe ndị ọzọ, dị ka igwu ala na ikpofu ahịhịa. gbakwunyere, A na-akpụ ala nke ọ bụla akpa ka ha kpọchie ọnụ mgbe a na-achịkọta ya, ya mere, ha anaghị ewepụta ohere dị ukwuu na okpuru ulo gị, ụlọ nkwakọba ihe, ma ọ bụ ebe ọ bụla ị na-eme atụmatụ itinye gị. nri lanarị ha na-enye.
Mgbe ị na-azụta ngwaahịa nri amamihe, ị nwere ike họrọ n'etiti nri ụtụtụ, nri ehihie na nri abalị nhọrọ, yana nhọrọ nke gourmet inine akpọsara akpọnwụ, mkpụrụ osisi na anụ.
Ụfọdụ nhọrọ nri ụtụtụ gourmet gụnyere crunchy granola, ọka ọka, na apụl cinnamon. Nhọrọ gị maka nri abalị na nri ehihie nwere nri na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ dị ka pasta Alfredo, chiiz ma ọ bụ macaroni na cheese, rotini, tortillas ma ọ bụ tomato basil ofe, stroganoff na teriyaki na osikapa. Ngwaahịa ha dị mfe ịkwadebe. Ụfọdụ nri gị chọrọ naanị mmiri esi mmiri ma emechaa 12-15 nkeji oge nri gị ga-adị njikere.
Wise food storage doesn’t necessarily end with disaster-related emergencies. Ị nwekwara ike iri nri mberede echekwara n'oge mgbe gị ma ọ bụ ezinụlọ gị chọrọ nri ngwa ngwa, mana ike agwụla gị isi nri.
Uru nri na ekpomeekpo nke ngwaahịa Wise Foods ga-abụ nnukwu nnọchi maka nri arụrụ n'ụlọ. gbakwunyere, ọ bụrụ na ị na-akwakọba ụdị nri ndị a, ị ga-adịkwa njikere maka nsogbu akụ na ụba ọ bụla nwere ike ibilite n'ọdịnihu.
Ịkwado nri mberede ga-eme ka ezinụlọ gị na-eri nri mgbe niile n'oge oke ọnụ ahịa na ihe isi ike ego.
Ụlọ ugwu na-eme ka nri akpọnwụwo oyi
Nri Ụlọ Ugwu, nye nri ndị akpọnwụwo akpọnwụ maka otu oge, nri mberede niile kwesịrị ịnwe ngwakọta protein, carbohydrate, na abụba. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe dị n'ụlọ ahịa na-akwakọba nchekwa nri mberede nke gị, ọ dị mma ịnwe nhọrọ nke anụ a gwọrọ na nke mkpọ, mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri, kuki, ọka, na mmiri. A ga-enwerịrị oghere igbe na isi iyi ọkụ, dị ka stovu ma ọ bụ ọkụ eletrik.
Ulo Ulo Ulo Ugwu a gunyere nri ato, atọ akwụkwọ nri, na nchịkọta iri nke 10 nke nri ehihie ma ọ bụ nri nri abalị, zuru nri maka otu okenye ruo ụbọchị atọ. Blueberry na Milk Granola, Anụ Ahụhụ Kpụrụ Ahụhụ, Ham na Ose Akpu akwa, Ogige Green Peas, Dum ọka, Bee Green Agwa, Anụmanụ Stroganoff, Ọkụkọ Teriyaki, Chili mac na beef, osikapa na ọkụkọ, mmiri pasta, na anụ ezi na-atọ ụtọ na osikapa. Enwere ike ịkwadebe nri nlanarị ihe mberede ndị a niile n'ụzọ dị mfe n'okpuru ọnọdụ siri ike site n'ịgbakwunye mmiri ma nwee ndụ ndụ nke afọ asaa. Onye ahịa nwere afọ ojuju Christopher Coakley si Santa Barbara, Calif. kwuru, “Nri Mountain House na-atọkarị ụtọ karịa ihe ndị ọzọ akpọchiri akpọnwụ.
Iwulite nchekwa nri nke gị dị mma maka ọnọdụ ebe ịkwesịrị ịnọpụ onwe gị maka izu abụọ. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ihe ga-esi na ya pụta, tụlee ngwa nchekwa nri mberede. Ha nwere igbe na akpa nri oyi kpọnwụrụ akpọnwụ nke nwere ike inyere gị na ezinụlọ gị aka otu ọnwa ruo ihe karịrị otu afọ.. A na-ewere MRE, ngwa ndị a nwere ngwakọta nke nri na ihe ndị a pụrụ ijikọ ọnụ.
Nri nlanarị ụlọ ugwu
Nri Ụlọ Ugwu 10 akpa na mkpọ, chọrọ naanị mmiri oyi iji mee ka mmiri dị ọcha. Mgbe ịchọrọ iji nchekwa nchekwa nri mberede gị, cheta na nke ọ bụla 10 igbe – ihe dị ka otu galọn nha – kwesịrị ịdịru naanị otu ọnwa. Ọnweghị nri dị na ngwa ndị a kwesịrị ka etinye ya na friji. Na mgbakwunye, ngwa ngwa na-enwekarị calorie akọwapụtagoro nke ị ga-eri ma ọ bụrụ na ị gbasoo aro usoro onunu ogwu akọwapụtara.
Being prepared with enough mountain house freeze dried foods will help you and your family through tough times. Ọzọkwa, Ekwesịrị iji ihe mgbakwunye vitamin na mineral mee ihe ngwa nri mberede, n'ihi na ị nweghị ike iri ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'oge ọdachi na oge mgbake.
Once have an emergency food storage program, malite site n'imepụta ndepụta dị mfe nke ihe gị na ezinụlọ gị na-eji kwa ụbọchị – ihe ndị ị nwere ike ịchọ na mberede; dị ka nri ọkacha mmasị & ihe ọṅụṅụ, vitamin & ọgwụ, uwe na-ekpo ọkụ & akpụkpọ ụkwụ, akwa akwa, batrị, kandụl, ego ọzọ, ụzọ ọzọ iji kpoo nri ma ọ bụ mmiri ọkụ, redio ejiri aka rụọ & ọkụ ọkụ, wdg. Ya mere, jikere onwe gị maka ụdị ihe mberede ọ bụla, ma nwee obi ụtọ ime ya. Na Thrive ndụ, ị ga-enwe nnọọ obi ụtọ na i mere.